Madaxweyne Farmaajo oo labo sano jirsaday: Lix arrimood oo u gaar ah dawladdiisa
Saturday February 09, 2019 - 10:10:02 in Wararka by Mogadishu Times
Farmaajo oo khudbad jeediyay ka dib markuu ku guuleystay xilka madaxweynaha Labo sano ayaa kasoo wareegtay markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 8-dii Feberaayo 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Farmaajo asagoo
Farmaajo oo khudbad jeediyay ka dib markuu ku guuleystay xilka madaxweynaha Labo sano ayaa kasoo wareegtay markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 8-dii Feberaayo 2017 ayaa madaxweyne loo doortay Farmaajo asagoo 23-kii isla bishaasna Raysul Wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayrre. Dadka dhaliila wax qabadka dawladda ayaa sheega in ay jiraan waxyaabo badan oo ay dawladdu ka gaabisay wax ka qabashadooda, sida arrimaha ammaanka iyo dastuurka, halka dhanka kale ay jiraan waxyaabo badan oo hormar ah oo ay xukuumaddani ku tallaabsatay. Haddaba laba sano kadib, maxaa kamid ah waxyaabaha ay Xukuumaddani uga duwan tahay kuwii iyada ka horreeyay? Qormadaan ayaynu ku eegaynaa qaar kamid ah arrimahaas oo aan horay dalka uga dhicin.
1. Khilaaf la'aanta madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha
Tan iyo markii 23-kii Feberaayo 2017 uu madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo Raysul Wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre ma jirin khilaaf muuqda oo soo kala dhex galay labadaas mas'uul ee ugu sarreeya dalka.
Madaxweynaha iyo Raysul Wasaaraha ayaa si dhow u wada shaqeeya ayagoo fagaareyaasha ka sheega sida ay uga go'an tahay xoojinta wada shaqayntooda.
Khilaafka soo noqnoqda ee dhex mara mas'uuliyiinta dalka ugu sarraysa ayaa la sheegaa in uu gaabis ku keeni jiray hawlaha hor yaal xukuumadda oo ammaanku uu ugu horreeyo.
Dawladda haatan jirta ayaa lagu ammaanaa khilaaf yarida madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha ayadoo la sheego in isu dhawaanshahoodu uu horseeday in ay go'aanno wadajir ah qaataan.
Image captionMaamul goboleedyada waxaa laga dalbaday xisaab celin
Tallaabadan ayaa dadka falanqeeya arrimaha Soomaaliya waxa ay sheegaan in ay tahay mid dawladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay u madax banaanaato siyaasadda arrimaha dibadda, taas oo dawladdu ay sheegto in dastuur ahaan ayada uun ay go'aan ka gaari karto.
3. Khilaafkii Khaliijka
Go'aankaas ay xukuumaddu qaadatay ayaa la sheegaa in ay uga duwan tahay xukuumadihii ayada ka horreeyey oo ku dhiirran waayay in siyaasadooda ku aadan Khaliijka ay qeexaan.
Jabhadda ONLF oo ka hadashay xariga Qalbi Dhagax
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo 18-kii November 2017-kii shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aankii xukuumadda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacan galisay Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax). Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wareysi gaar ah oo uu BBC-da siiyay ku taageeray go'aanka baarlamaanka uu ka qaatay arrintaasi.
Image captionMadaxda Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya
Go'aankan ayay dad badan ku tilmaameen mid dhiirran, marka la eego dowrka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya, oo xilligii dowladihii hore, qeyb weyn ka ahaa go'aannada siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya.